UCubriko uza kukusa kwimidlalo yempambano ngomculo we-elektro | I-Androidsis
Olunye ulonwabo olungaqhelekanga oluvela eKetchapp: UCubriko kunye nemizobo yakhe yevektha
UCubriko yinto entsha yaseKetchapp apho kufuneka sihambise i-avatar, siza kuqala ngesikwere, kamva ngobume obunamacala amabini obangela ukuveliswa kweemilo ezahlukeneyo eziya kuzama ukusenzela indlela.
I-Cubriko ivela kumdlalo weKetchapp njenge ukonwaba ngokungaqhelekanga kunye nokulula ukukwazi ukusidibanisa kwimizuzu nje embalwa. Ngethamsanqa, njengezinye izihloko zeMidlalo yeKetchapp, siya kuba namanqanaba okuwagqiba, kwaye sikwazi nokwenza ngokwezifiso imeko-bume iphela.
1 Okuqhelekileyo kuhlala kusefashonini kwiselfowuni
2 Vula ii-avatars kunye nemeko eCubriko
3 Imisebenzi engaphezu kwama-40
Okuqhelekileyo kuhlala kusefashonini kwiselfowuni
Sinayo nje komnye uKetchapp omkhulu oqhelekileyo kwezi ntsuku zidlulileyo, Ukuza kuthi ga ngoku kwiCubriko, isihloko esithi yamkela imifanekiso yevector kunye nezibane ze-neon esinokuthi sizenze ngokwezifiso zethu. Sithi zizenzele ngenxa yokuba siya kuba nesixhobo "sokupeyinta" zonke izinto ezivela kwiscreen xa sidlala umdlalo.
Oku kuthetha ukuba ungayifaka kwakhona i-avatar ephambili, ityhubhu enamacala amathandathu njengesiseko somdlalo kunye nokusingqongileyo yonke "indawo" encinci yeCubriko. Xa ubucukubhede bomdlalo bulula, kuya kufuneka sijikeleze ityhubhu enamacala amathandathu ukuze ihambise i-avatar ephambili ukusuka ekhohlo iye ekunene, enye iwele kuthotho lwezinto ezenziweyo ukuze ekugqibeleni ziqale umdlalo ukuba singqubana nenye.
Ngale ndlela siza kudibana kwi Cubriko ngemidlalo ekhawulezayo nengxolayo Ezama ukukufumana uxakeke kwimizuzu eliqela ngomdlalo owenziwe ngenjongo yokuba ngumntu oqhelekileyo. Ekuphela kwento esele sinayo imidlalo eyoneleyo yolu hlobo, ngoko ke inokuwa ezindlebeni.
Vula ii-avatars kunye nemeko eCubriko
Ngokuba nobuhle obubonakalayo "bendawo" i-la Tron, ifilimu yaseMelika yee- eighties eyasizisela inxenye yekamva eliqinisekileyo esinalo namhlanje, ukuvulwa komxholo kuyahamba ii-avatars ezintsha, ezinje nge-Facebook okanye i-Instagram, okanye ufumane iimeko zokuzonwabisa ngazo ngokubonakalayo kumdlalo ngamnye esiwudlalayo.
Into eqhelekileyo esiyibonayo kolu hlobo lwemidlalo eqhelekileyo apho umxholo uya kuvulwa yenye yeenjongo ekufuneka zifezekisiwe, ngaphandle kwe kuthetha iinzuzo zoqoqosho kwisifundo epapasha umdlalo, kule meko uKetchapp.
UCubriko usebenzisa isandi esilunge kakhulu ukuba sibe se-elektroniki, kuba ubuhle bobugcisa obudlalayo budlala amakhadi akhe kakuhle ukuze ilingane yonke into kumdlalo obekwe njengowugqibeleleyo ukudlala imidlalo ekhawulezayo. Ngelixa silinde emgceni kaMad Cool eMadrid.
Imisebenzi engaphezu kwama-40
Kukwakho nohambo, oluqhelekileyo nakolu hlobo lwemidlalo eqhelekileyo, kunye nokubanakho kokuvula ii-avatari ezingama-60 kunye nezikhumba ezili-10. Uya kuba nayo phambi kwakho imiceli mngeni engama-80, ukwazi ukufumana izipho zemihla ngemihla kwaye uthelekise amanqaku akho nabanye abadlali emhlabeni. Ngale nto etafileni UCubriko ushiya ezinye ngaphandle kweemvakalelo ezilungileyo, ukuba iyajongwa ngokwembono yabantu "abaqhelekileyo".
Kwicandelo lobugcisa iCubriko ilungile, ngaphandle kwako nakuphi na ukungasebenzi, isitayile esibonakalayo esibonakalayo kunye neziphumo ezenziwe kakuhle zesandi kunye nengoma yesandi. Yonke into inyanyekelwa kakuhle, njengoko kuhlala kusenzeka kunye nemidlalo epapashwa ngeveki yiMidlalo yeKetchapp, edume ngokuba yenye yezona zinto zibalaseleyo kolu luhlu. Njengoko unokuthi, kukho umdlalo okwethutyana.
UCubriko ngumntu oqhelekileyo ozivumela ukuba adlalwe Kwaye ngemizobo yayo yevektara igubungela loo panorama yemidlalo apho izibane ze-neon kunye nomculo we-elektroniki zinakho ukusenza silibale ilizwe liphela. Ekuphela kwento oya kudinga ubuchule obuninzi kunye nengqondo yokuhamba ngayo ngokwamanqanaba, kuba imidlalo iyadina kwaye ayishiyi ndawo yokuphumla, oko kukuthi, inoxinzelelo, ke ngomonde nokulunga isimilo.
Ukudinwa kwesikrini sikaKetchapp
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Olunye ulonwabo olungaqhelekanga oluvela eKetchapp: UCubriko kunye nemizobo yakhe yevektha
Ezona zixhobo ze-eReader ze-Android
IHTC U12 + ihlaziywa ngokudibanisa ukusondeza okuzenzekelayo kunye nemisebenzi emitsha